Bacaha dahaarka leh ee bacda qaboojiyaha saaxiibtinimo leh ee bacda qaboojiyaha qadada madow
Nambarka Tusaalaha: Bacda meeldhexaadka ah
Nooca Qaabka: heerka
Magaca badeecada: Bacda Bixinta Pizza dahaaran
Isticmaalka: Bixinta Pizza
Cabbirka boorsada: 23 "x 14" x 15 "
Midabka: Midabka la habeeyay
Logo: Daabacaadda Silkscreen ama daabacaadda gudbinta kulaylka
Tayada: ISO 9001
Xirxirida: 1 kumbiyuutar oo ku jira bac poly
Muunad: Sample Customized
Awoodda Bixinta: 30000 Piece/Pieces per Month Jumlada Jilibka Qaboojiyaha Bacda
Mid ka mid ah badeecada ayaa ku jirta hal bac poly
Tirada (Cadad) 1 - 500 > 500
Qiyaasta Waqtiga (maalmo) 45 In laga wada xaajoodo
Waxyaabaha 600D Polyester + 8mm xumbo PE + xumbo Aluminium ah
Cabbirka 23 "x 14" x 15 "
Midab Midabada la habeeyay
Logo Daabacaadda Silkscreen ama daabacaadda gudbinta kulaylka
Qiimaha muunadda $ 50
Waqtiga tusaalaha 10 maalmood gudahood
Xidhmada Mid ka mid ah badeecada ayaa ku jirta hal bac poly
Awoodda wax soo saarka 30000pcs bishii
Waqtiga dirida 40 maalmood kadib marka la xaqiijiyo amarka ugu dambeeya
Adeeg OEM & ODM
Siyaasadda Muunadda Sambalku waa bilaash, laakiin waxaan u baahanahay lambarka Fedex, UPS ama DHL markab.
Dekadda FOB shenzhen
* * Iftiimin & Fudud in la Qaato ： Waxaa lagu Sameeyay Gacmo Raaxo leh, Raaxo leh, Qalab dibedda lagu dahaadhay, dahaarka xumbo PE & bireed aluminium ah.
* * Dhismaha Awoodda Dheeraad ah: Waa La Dhisay Si Loo Ilaaliyo Alaabta.
* * Jeebka Hufan: Eeg macluumaadka gudbinta ee muhiimka ah jaleecada.
* * La -burburin karo: Ku habboon Kaydinta Meel qaali ah Baabuurkaaga, Teendhadaada, Gurigaaga ama Xafiiskaaga.
* * YKK Zippers: 3 inji oo jijimooyin jiinyeer xarig ah oo loogu talagalay dadka ay ku adag tahay inay qabsadaan siibadaha birta ah.
* * UJEEDO BADAN: U fiican gaadiid qaadista ama qaado dhammaan alaabtaada kulul ama qabow oo u adeeg sida bacda cuntada lagu geeyo! Ku hay jirriddaada dukaamanka weyn, dukaamaysiga guud, suuqyada beeraleyda, jimicsiga, kaamamka, doon doonista, ama u adeegso sidii qabanqaabiyaha jirridda.
* * SAXIIXA & ECO SAAXIIBNIMADA: Boorsadan wax iibsiga ee dib loo isticmaali karo waxay ku habboon tahay dukaamaysiga raashinka waxayna beddel cajiib ah u tahay bacaha hal mar la isticmaalo oo aan dib loo warshadeyn oo inta badan wasakheeya biyaha iyo meelaha kale ee dadweynaha. Dooro hab-saaxiibtinimo leh oo lagu ilaalin karo Dhulkeena. Baabuurkaaga ku hay sumadaha wax -gadashada ee la laalaabay.
Hore: Boorsada meeldhexaadka ah ee suunka garabka dahaaran ee bacda meeldhexaadka ah ee kuleylka kuleylka leh
Xiga: Boorsada Bixinta Cuntada Tayada Ganacsi Bacaha sidda dahaaran ee cuntada kulul
Boorsada Meel Qabow
Bacda kubbadda meeldhexaadka ah
Bacda Qaboojiyaha Weyn
Bacda Qaboojiyaha Qadada
Bacda meeldhexaadka ah ee jilicsan
Boorsada qaboojiyaha ee suunka garabka dahaaran oo dib loo isticmaali karo ...